ဧပြီလ၂၇ရက်နေ့တွင် Samsung Galaxy Note 8.0 ကို စတင်ရောင်းချမည် ~ The ICT.com.mm Blog
ဧပြီလ၂၇ရက်နေ့တွင် Samsung Galaxy Note 8.0 ကို စတင်ရောင်းချမည်
ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် Samsung Brandသည် မြန်မာပြည်တွင် ထိပ်တန်းဈေး၊ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများထဲတွင် ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေတဲ့
Samsung Model များ ထဲတွင် Model အသစ် Samsung Galaxy Note 8.0 ကို မြန်မာ ပြည်တွင် ဧပြီလ၂၇ရက် နေ့တွင် တရားဝင်စတင် ရောင်းချတော့မည် ဖြစ်ကြောင်းကို Thai Samsung Electronic Co.,Ltd. Sinior Marketing ကိုသီဟလုလင်က ပြောသည်။ “ပစ္စည်းသစ်တွေတော့ အများကြီး ဝင်လာဖို့ ရှိတယ်။
Samsung Glaxy Note 8.0ကိုတော့ ၂၇ရက်နေ့မှာ Samsung Showroomတွေ Mobile ဆိုင်တွေ တော်တော်များများမှာ အလုံးရေ အကန့်အသတ် မရှိ ရောင်းချပေးသွားမှာပါ။ ဈေးနှုန်းကိုတော့ အဲဒီရက်နား ရောက်တော့မှ သေချာ ပြောလို့ရမှာ အခုထိတော့ ခန့်မှန်းချေ ပြောလို့ မရသေးပါဘူး”ဟု ၎င်းကပြောပါသည်။ Samsungသည် လူကြိုက်အများဆုံး Smart Mobile ဟန်းဆက်အဖြစ် ရပ်တည်နေလျက်ရှိပြီး Samsung Galaxy S4ကိုလည်း ပြည်တွင်းမှ Samsung ချစ်သူများ ကလည်း မျှော်လင့် စောင့်စားနေကြကြောင်း သိရသည်။
Galaxy, Note 8.0, Samsung
Newer Facebook ရဲ့ Android Event ဟာ Phone အတွက်မဟုတ်
Older ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း Nok Air က မြန်မာ နှင့် လေကြောင်းများ ပျံသန်းမည်
SAMSUNG Galaxy Note20 အကြောင်း
ဒီ Note လေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်က ပုံစံမျိုးနဲ့ မတူကွဲပြားပြီး ခွဲထွက်လာတ...
PRE-ORDER Samsung Galaxy S10 Series & Get FREE Wireless Galaxy Buds worth K200,000
Samsungရဲ့ Galaxy S10e, S10 နဲ့ S10+ တွေကို ICT.com.mmမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃မှ မတ်လ ၁၁ ရက် အတွင်း တန်းစီစရာမလိုပဲ စတိုင်ကျကျ PRE-ORDER လုပ်လ...
Featured, Gadgets, News, Review
Samsungက မျိုးဆက်သစ် စမတ်နေအိမ် ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ နေအိမ်လုံခြုံရေး ၀န်ဆောင်မှုကို ကြေညာ
Samsungက မကြာမီက SmartThingsကို ၀ယ်ယူခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိဖို့ သိပ်မကြာတော့ပါဘူး။ Samsungက အခုပဲ SmartThing၀န်ဆောင်မှု ဗားရှင်းအသစ...
Autismစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ ကလေးငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Look at Me Appကို Samsungဖြန့်ချီ
Autismဆိုတာ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ဟန့်တားတဲ့ စိတ်ဝေဒနာတစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာတစ်၀န်းလုံးမှာ အဲဒီရောဂါခံစားနေရတဲ့ ဝေ...
Samsungက တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်မှုကို ပြန်လည် သတိပေးလိုက်ပေမယ့် ဒါဟာ လုံလောက်ရဲ့လား
မကြာခင်နှစ်များအတွင်းမှာ Samsungက ကမ္ဘာ့စမတ်ဖုန်းရောင်းအားကို ဦးဆောင်သူ ဖြစ်လာပြီး Androidရဲ့ ဘုရင်တစ်ဆူ ဖြစ်လာပါတယ်။ Appleရဲ့ အောင်မြင...
Featured, Gadgets, Review
Samsungရဲ့ Gear S စမတ်နာရီအသစ် အကြောင်း
ဒီနှစ်ထဲမှာ Gear 2, Gear Neo, Gear Liveစမတ်နာရီများ ရောင်းချခဲ့တဲ့ Samsungက အခုလည်း Gear S စမတ်နာရီကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့က...
Featured, Mobile, Review
Samsungက Galaxy Alphaစမတ်ဖုန်းကို ကြေညာ
Samsungက Appleကို ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Galaxy Alphaစမတ်ဖုန်းကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Galaxy စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကြေညာ...
Samsung မှ galaxy s5 အတွက် Video စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားမှုကို လူအများစိတ်ဝင်စားစေမဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုအဖြစ် ရိုက်ကူး
Posted by	 Aung Ko Htet
Samsung မှ လူကြိုက်များပြီး စိတ်ဝင်စားမှုရှိစေမဲ့ Video file တစ်ခုကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Video file ကို Samsung Galaxy S5 Smartphon...
Samsungက Ooredoo Myanmarနှင့်လည်း လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီ
ကာတာဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ Ooredoo Myanmarသည် ယင်းတို့၏ ဆင်းမ်ကတ်များ စတင်ရောင်းချသည့် အချိန်မှစတင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် မိုဘိုင်းအင်တာန...
Samsungနဲ့ LGတို့က Android Wear စမတ်နာရီများကို ပြသ
Googleက စမတ်နာရီများအတွက် တီထွင်ထားတဲ့ Android Wear OSကို မေလမှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်လ ၂၅ ရက်မှာကျင်းပတဲ့ Google I/O Conferenceမှာတော့ And...
Telenorနှင့် Samsung ပူးပေါင်း
Telenor အနေဖြင့် ၎င်း၏ မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကတ်များ ရောင်းချရာတွင် ကမ္ဘာကျော်မိုဘိုင်းဟန်းဆက် Brand တစ်ခုဖြစ်သည့် Samsungနှင့် ပူးတွဲရောင်းချ...